आजपनि ओरालो लाग्यो सेयर बजार, कसले कमाए अनि कसले गुमाए ?
२५ असार, काठमाण्डौं । धितोपत्र बजारमा मङ्गलबार उकालो लागेको नेप्से परिसूचक बुधबार भने ओरालो लाग्यो । उतारचढावका बीच नेप्से परिसूचक १.१२ अङ्कले घटेर एक हजार २४९.१५ मा पुगेर रोकियो । ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ०.७३ अङ्कले घटेर २६८.३३ मा थामियो ।
घट्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् कति छ आज प्रतितोला
२९ असोज, काठमाडौँ । बिगत लामो समयदेखि लगातार घडबढ भइरहेको…
२८ असोज, काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से…
दोहोरो अङ्कले घट्यो आजको सेयर बजार, कसले कति गुमाए त ?
धौलागिरीमा नेपाल टेलिकमको ‘फोर जी’ सेवा सुरु
ज्योति विकास बैंक र इस्टर्न एजेन्सी बीच सम्झौता